Dhaamsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Irraa Ergame. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhaamsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Irraa Ergame.
“Dhaamsa qeerroof hawwaasa oromoo Harro Guduru Wallaggaa.
Hoggantootaaf miseensota poolisii oromiyaaf kora bittinneessaa hundaaf.
Nuti hawwaasniif qeerroon qabsoo hadhooftuu gochuudhaan oromoo maraan wal taanee TPLF harkaa hangoo isin harka kan galchineef Oromoo addaan qoonnee waliin jiraachuuf miti.
Qabsoon uummanni Oromoo godhe Oromiyaa waliin qabnurra Oromoon hunduu waloon akka jiraannuufi.
Kanas Mootummaan federaalas ta’e Mootummaan Naannoo oromiyaa beekuudhaan gaaffii uummataa cimaa kan ta’e ABOf WBOn akka uummataa tiksaa uummatasaa Oromoo waliin jiraatu waan ta’eef carraa banee jira.
Nutis isiniin akka qaama Oromoo tokkootti isin laalla.
WBOs akkanuma akka Oromoo tokkootti ilaalla.
Asitti WBO waanti adda taasisu waggaa dheeraa qabsoo sabaaf jecha gidiraa dubbachuufuu ulfaatu nuuf arguusaafi qabsoo godhame kanatti wareegama lubbuu laatee tiksee asiin ga’uusaati.
Kanaaf WBOn eenyuunuu caalaatti oromoo hunda bira jaalalaaf kabaja guddaa qaba.
Kanaaf nuti akka qeerroof hawwaasa godina kanatti adeemsa isin torbee kana guutuu dhimma WBO irratti karoora mootummaatiin faallaa deemtan argaa jirra; sinirrattis jibbineerra. WBO adamsuuf qophaa’uun amma afeera. MNO oromiyaaf hoggantoonni federaalaayyuu dirree WBO daawwatanii jiru. Isin garuu faallaa mootummaa deemaa jirtu. Hoggantoonni poolisii godinichaa waanti isin mana dhugaatiitti dubbattan yaada kanaaf ragaadha.
WBOn hoggansa nurraa fudhaachuufi hanga dandeenyu dura dhaabbanna jechuudhaan nyaachaa dhugaa marii gootu. Waanti baayyee nama gaddisiisummoo lubbuu ilmaan Oromoof hantummaa dhabuutiin amma miseensonni keenya asii kun jirtutti harka hin laannu jechuun hadhoof hadhoo walitti diruuf yaada qabaachuu keessani.
Kanaaf yaada summaa’aa faallaa mootummaaf uummataa kanarraa akka deebitan isin akekkachiisna. WBOnis jibba isin qabdaniif kana quba hin qabu, haaloos sirraa hin qabu. WBOn nuuf haaraa miti waggoota kana hudda akka maatiitti waliin turre.
Yeroo kana hundaa keessatti hamaa poolisii oromiyaatti yaadanii hin beekani. Nutis isanuma waliin yeroo isin hamaa hojjechaa turtanuu hamaa sinitti yaannee hin beeknu.
Kanaaf yaadaaf qophii torban kana guutuu qabdan irraa akka deebatan isin gaafanna. Garuu kanarra dabartanii WBO adamsuuf qophii keessan kan itti fuftan taanaan.qeerroof hawwaasa magaala kanaa hunda kan loltaniif hawwasniif qeerroon magaalichaallee ofirraa ittisuuf kan yaalu ta’u isin beeksisna.
Qeerroof hawwaasni Godina Horro Guduru Wallaggaas haala kana beekuun mirga mootummaan biyyattii nuuf eyyame utuu hin cabsiin namoota gareetiin mana dhugaatiitti mari’achuun obbolaa lammeen walitti buusuuf marii godhan dura dhaabbachuuf qophii akka gootan isin beeksisna. WBOnis
Oromiyaa keessa jiraachuuf mirga wal qixxee qabu. Wal ta’anii diina faccisuunis dirqama seeraatis seenaatis.
Qeerroo Bilisummaa Oromoo Horroo Guduruu Wallaggaa
Magaalaa Naqamteetti Qophiin Hirrira Guyyaa Boriif Godhamaa Jira. Hagayya 12, 2018.
ONN/TVOMT:Haala Yeeroo Irratti Marii Dr Baaruu waliin goone.Hagayya 12/2018
Simannaa Gooticha Waaraana Bilisummaa Oromoo Gameessaa jaal Eebbisaa Galataa Gammoojjii ertiriyaa keessaa gara waggaa 16,mana hidhaa Qilinxoo Waggaa lama,Sudaanii fi Bakka garaagaraa wagga 5 ,Walumaagalatti waggaa 23 boodaa lammii fi maatiisaa lafa dhalootaasaatti guyyaa har’aa deebi’ee argame.
Jaal Eebbisaa Galataa Gootaa fi jajjabee addaa Mooraa Waraana bilisummaa Oromoo keessatti nama qooda olaanaa qabaataa tureedha.
Seechis gara fuulduraatti nama abdii guutuu qabu,Hiree fi egeree Oromoo fiixaam baasuuf nama yoomuu onnee guutuun warraaquudha.
Jaal koo Jaalatamaa fi sabboonaa sabaa baga nagaan maatii fi lammii keetti dabalamte.
DIRQAMA ITTI KENNAMETU WACCISIISAA JIRA; Irra Hin ilaaliin Oromoo! – https://t.co/2eZpVp1OwD pic.twitter.com/xztwykDeQp
— Kichuu (@kichuu24) August 12, 2018